Huawei ga-ebuputa mbadamba na sistemụ ọzọ karịa Android | Gam akporosis
Huawei ga-ebido mbadamba na sistemụ arụmọrụ ọhụrụ
Edere Ferreno | | Huawei, Mbadamba gam akporo
Huawei anọwo na-akwadebe maka jiri sistemụ arụmọrụ gị na ngwaahịa gị, n'ihi esemokwu ya na United States. Ya mere na mmalite nke ọnwa egosi HarmonyOS, nke dịka ụlọ ọrụ ahụ nwere ike isi rụọ ọrụ na ụdị ngwaọrụ niile. Agbanyeghi na ugbu a atụmatụ atụmatụ ahụ ga-aga n'ihu na-eji gam akporo, ha nwere ihe ijuanya ugbu a na ọrụ ọhụụ.
Ebe ọ bụ na Huawei na-arụ ọrụ na ịmalite mbadamba nkume na-enweghị gam akporo dị ka sistemụ arụmọrụ. Ma ha agaghị eji HarmonyOS ma. Kama, ụlọ ọrụ ahụ na-arụ ọrụ na sistemụ arụmọrụ Russia ọzọ, nke a na-akpọ Aurora OS, nke a ma ama na Russia. Companylọ ọrụ ahụ gaararịrị nkwekọrịta na Russia.
Aurora OS bụ ụdị Sailfish OS gbanwere, nke bụ otu n'ime sistemụ arụmọrụ kachasị eji na Russia. Nke a bụ ahụmahụ pilot maka Huawei, nke gosipụtara mmasị mgbe ọ hụrụ nnukwu ewu ewu nke sistemụ nrụọrụ a na mba ahụ. Maka nke a, akara ndị China ga - emepụta mbadamba 360.000 maka ahịa Russia.
N'oge a ekwupụtabeghị nkwekọrịta a na eze. Ọ bụ ezie na mgbasa ozi dị iche iche na-egosi na mkparita uka emeela nke ọma. Ya mere, a na-atụ anya na ụbọchị ndị a ka a ga-ekwupụta ọkwa ọkwa gọọmentị, nke mere na ọ ga-abụ ọhụụ ọhụụ maka ndị nrụpụta.
N'ụzọ dị otú a, Huawei ga-enye ya nzọụkwụ mbụ na sistemụ ọzọ ọzọ na gam akporo. Ọ bụ ezie na ọ bụ ihe maka oge a ga - ejedebe naanị na ahịa Russia, site na ihe a ghọtara. Anyị amaghị ma ọ bụrụ na ha nwere atụmatụ ga-eme n'ọdịnihu iji wepụta mbadamba nkume na Aurora OS na mpụga Russia.
Anyị na-atụ anya na adịghị anya a ga-enwe nkwenye n'echiche a, na mwepụta nke mbadamba Huawei ndị a na Aurora OS. Nzọụkwụ dị mkpa maka onye nrụpụta China, nke n'ụzọ dị otú a na-abanye ọrụ dị iche. Kedu ihe ị chere gbasara mkpebi a nke akara ndị China?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei » Huawei ga-ebido mbadamba na sistemụ arụmọrụ ọhụrụ
Etu esi edetuo ederede site na foto na Foto Google
Amazfit GTS, Amazfit Stratos 3 na Amazfit X: Ihe ngosi Xiaomi ohuru